शेर्पा संघ बेलायतका अध्यक्ष साना शेर्पाको कोरोनाबाट निधन भएको छ । भोजपुर स्थायी घर भएका ५१ वर्षीय शेर्पाको उपचारका क्रममा लण्डनको सेन्ट थोमस अस्पतालमा सोमबार दिउँसो १ बजे निधन भएको पाल्पा शेर्पा संघ वेलायतका आङ दावा शेर्पाले जानकारी दिए ।
यसैवीच विश्वभर रहेका शेर्पा संघ संगठनहरुले शेर्पाको निधनमा गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
शेर्पाहरुको छाता संगठन नेपाल शेर्पा संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शेर्पाको निधनले समुदायमा अपुरणीय क्षति पुगेको उल्लेख गरेको छ । केन्द्रीय सचिव लाक्पा जी शेर्पाद्धारा हस्ताक्षरित शोक वक्तव्यमा भनिएको छ ‘शेर्पा समुदायको हकहित, अधिकार, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण विकास र समाजलाई एकताबद्ध बनाउँदै अघि बढाउने क्रममा स्व. शेर्पाले पुर्याउनु भएको योगदानको शेर्पा समुदाय तथा सिंगो मानव जगतले सदासम्मान गर्दछ ।’
संघले स्व. शेर्पाले समुदायमा पुर्याएको योगदानको समेत वक्तव्यमा चर्चा गरेको छ ।